Manoloana ny fiovan’ny toetr’andro : faritan’ny minisitera ny politika momba ny angovo | NewsMada
Manoloana ny fiovan’ny toetr’andro : faritan’ny minisitera ny politika momba ny angovo
“Tsy afa-misaraka ny angovo sy ny rano”. Io ny nambaran’ny minisitry ny Angovo, rano sy ny akoranafo, Rasoloelison Lantoniaina, omaly, teny amin’ny kaominina Anosizato Andrefana, Antananarivo Atsimondrano. Nitondra fanazavana ny amin’ny politika vaovao mahakasika ny angovo sy nanentana ny mponina amin’ny fahadiovana ny minisitra.
“Misy fiantraikany ratsy lehibe amin’ny famatsiana rano sy ny angovo ny fiovan’ny toetr’andro, tsy any amin’ny faritra atsimo ihany fa amin’ny faritra maro”, hoy ny minisitra Rasoloelison Lantoniaina. Manoloana izany, manana paikady vaovao hiatrehana izay fiovan’ny toetr’andro izay ny minisitera. “Hatao izay hanamoràna ny vidin’ny gazy, ary tokony hialana ny fiheverena fa ho an’ny manan-katao ihany ny fampiasana gazy”, hoy ny minisitra.
Anisan’izay politika vaovao momba ny angovo izay ny fiaraha-miasa amin’ny sehatra tsy miankina, toy ny fifanarahana vao vita eo amin’ny orinasa amerikanina Fluidic sy ny Henri Fraise. Politika nofaritan’ny minisitera koa ny fanodinana fako ho lasa “fuel léger” ary amin’izao fotoana izao, miara-miasa ny sehatry ny indostria sy ny angovo, miainga avy amin’ny vokatry ny fambolena. Ny fary sy mangahazo, ohatra, samy azo ahodina trandrahina hahazoana akoranafo. “Ny haintany ankehitriny, tsy maintsy hitadiavana vahaolana hahitana angovo vaovao. Izay ihany koa ny fomba hikajiana ny tontolo iainana. Ampianarina ireny mpanao saribao ireny hitrandraka zavatra hafa sy hanaovao fomba fiasa”, hoy ny minisitra, Rasoloelison Lantoniaina.
Anosizato Andrefana : entanina amin’ny fanadiovana
Nofidina falain-tahaka ho an’ny fidiovana sy fanadiovana ny kaominina Anosizato Andrefana,. Satria tsy afa-misaraka ny angovo sy ny rano, ny fahadiovan’ny olona no miantoka ny fahasalamana hahafahana miasa hisian’ny fampandrosoana. Ho fatratrarana izany tanjona izany, nozaraina fitaovana (borety, angady, kofafa) ireo fokontany fito ao amin’ny kaominina ho fanadiovana ny tanàna. Misy ihany koa tokantrano nosafidina, notolorana fitaovana fidiovana ( koveta, fasiana rano, zinga, sns).
Tokantrano 410 notolorana izany. “Raha ny eto Anosizato Andrefana, efa tonga teto ny teknisianina nijery izay olona rehetra momba ny famatsiana jiro sy rano, ary amin’izao fotoana izao, voavaha avokoa ny olana amin’izany famatsiana izany”, hoy ny ben’ny Tanàna, Andriambololona Laurence. Hotohizana any amin’ny kaominina sy any amin’ny faritra hafa ny tetikasa toy izao, ho fanentanana ny rehetra hitandro ny fahadiovana.